သမုဒ္ဒရာများ မည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့သည်- သမိုင်းနှင့် ဘူမိဗေဒ | ကွန်ရက် မိုးလေဝသ
ဂျာမန် Portillo | 11/05/2022 10:00 | ဘူမိဗေဒ
သမိုင်းတလျှောက်လုံး သိချင်နေကြပြီ။ သမုဒ္ဒရာများ မည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့သနည်း။. XNUMX ရာစုအစောပိုင်းတွင်၊ ကမ္ဘာနှင့် အခြားဂြိုလ်များသည် နေမှနှုတ်ယူထားသောပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်သည်ဟု ယူဆကြသည်။ မြေကြီးပုံသဏ္ဍာန်သည် ပူလာပြီး တဖြည်းဖြည်း အေးလာသည်။ ရေများ စိမ့်ဝင်နိုင်လောက်အောင် အေးသွားသောအခါတွင် ကမ္ဘာ၏ ပူပြင်းသော လေထုထဲတွင် ရေငွေ့သည် အရည်အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပြီး မိုးသည်းစွာ ရွာလာသည်။ ပွက်ပွက်ဆူနေသော ဤမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင် မိုးရွာပြီး နှစ်ပေါင်းများစွာ ပူပြင်းသော မြေပြင်ကို ထိမှန်ပြီး ဟောက်သံများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်၊ ကမ္ဘာကြီး၏ ကြမ်းတမ်းသော မျက်နှာပြင်ရှိ အင်တုံများသည် နောက်ဆုံးတွင် ရေကို ထိန်းထားနိုင်လောက်အောင် အေးသွားကာ သမုဒ္ဒရာများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
သမုဒ္ဒရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံက ဤသည်မှာ အမှန်ပင်လား။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့သည်အသေးစိတ်ရှင်းပြသည်။
1 သမုဒ္ဒရာများ မည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့သနည်း။
2 ပင်လယ်ထဲမှာ မိုးရွာတယ်။
4 သမုဒ္ဒရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုအချို့
ယနေ့ ကမ္ဘာနှင့် အခြားဂြိုလ်များသည် နေမှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမဟုတ်သော်လည်း နေထွန်းချိန် တစ်ချိန်တည်းတွင် အတူတကွ ပါ၀င်လာသော အမှုန်အမွှားများမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်ဟု သိပ္ပံပညာရှင်များက ယုံကြည်ကြသည်။ ကမ္ဘာသည် နေ၏အပူချိန်ကို မရောက်ဖူးသော်လည်း၊ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ အမှုန်တွေ အားလုံးကို တိုက်မိတဲ့ စွမ်းအင်ကြောင့် အတော်လေး ပူသွားတယ်။ ဤမျှလောက်သေးငယ်သော ဒြပ်ထုသည် အစပိုင်းတွင် လေထု သို့မဟုတ် ရေငွေ့ မပါဝင်နိုင်တော့ပေ။
သို့မဟုတ် အလားတူပင်၊ အသစ်ဖွဲ့စည်းထားသော ကမ္ဘာ၏ အစိုင်အခဲများသည် လေထု သို့မဟုတ် သမုဒ္ဒရာများ မရှိပါ။ သူတို့ဘယ်ကလာတာလဲ။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ရေ (နဲ့ ဓာတ်ငွေ့) ဟာ ဂြိုလ်ရဲ့ အစိုင်အခဲအပိုင်းကို ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ ကျောက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ချောင်ချောင်ချိချိ ချည်နှောင်ထားပါတယ်။ အစိုင်အခဲအစိတ်အပိုင်းသည် ဆွဲငင်အား၏တွန်းအားအောက်တွင် ပိုတင်းကျပ်လာသည်နှင့်အမျှ အတွင်းပိုင်းသည် ပိုပူလာပြီး ပိုပူလာသည်။ ဓာတ်ငွေ့နှင့် ရေခိုးရေငွေ့တို့သည် ကျောက်နှင့် ၎င်းတို့၏ ယခင်ဆက်စပ်မှုမှ ဖယ်ထုတ်ပြီး အစိုင်အခဲအရာများကို ချန်ထားခဲ့သည်။
ထွက်လာတဲ့အပူတွေက ပြင်းထန်တဲ့ မီးတောင်ပေါက်ကွဲပြီး ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ကို ပြိုကျပျက်စီးသွားတဲ့ ပူဖောင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်လာပြီး စုပြုံနေခဲ့တယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာကြာအောင် ကောင်းကင်မှ အရည်တစ်စက်မျှ မကျခဲ့ပါ။. ၎င်းသည် အပေါ်ယံလွှာမှ စိမ့်ထွက်ပြီး ပေါင်းစုထားသော ရေငွေ့နှင့် ပိုတူသည်။ သမုဒ္ဒရာများသည် အောက်မှမဟုတ်ဘဲ အထက်မှ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
ယနေ့ခေတ် ဘူမိဗေဒပညာရှင်များက သဘောမတူသည့်အချက်မှာ သမုဒ္ဒရာများ ဖြစ်ပေါ်သည့်နှုန်းဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာများသည် သက်ရှိအစပြုကတည်းက ယနေ့ခေတ်အထိ အရွယ်အစားဖြစ်လာစေရန် နှစ်ပေါင်းတစ်ဘီလီယံခန့်အတွင်း ရေငွေ့များအားလုံး ပျောက်ကွယ်သွားပါသလား။ သို့မဟုတ် သမုဒ္ဒရာသည် ကြီးထွားလာကာ ဘူမိဗေဒအချိန်တစ်လျှောက်လုံး ဆက်လက်ကြီးထွားနေသည့် နှေးကွေးသောဖြစ်စဉ်တစ်ခုလား။
သမုဒ္ဒရာများသည် ဂိမ်းတွင် အစောပိုင်းကတည်းက ဖြစ်ပေါ်လာပြီး အရွယ်အစားမှာ စဉ်ဆက်မပြတ် ရှိနေသည်ဟု ထင်မြင်သူများသည် တိုက်ကြီးများသည် ကမ္ဘာမြေ၏ အမြဲတမ်းအင်္ဂါရပ်များအဖြစ် ထင်ရှားသည်ဟု ထောက်ပြကြသည်။ အရင်တုန်းကတော့ သမုဒ္ဒရာတွေက အများကြီး သေးငယ်တယ်လို့ ထင်ရတဲ့အခါ၊ သူတို့က သိပ်ကြီးပုံမပေါ်ဘူး။.
တစ်ဖက်တွင်မူ သမုဒ္ဒရာသည် တဖြည်းဖြည်း မြင့်တက်လာသည်ဟု ယုံကြည်သူများသည် မီးတောင်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့် ရေခိုးရေငွေ့အများအပြား လေထုထဲသို့ ပျံ့နှံ့နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ထောက်ပြကြသည်၊ ရေခိုးရေငွေ့သည် သမုဒ္ဒရာမဟုတ်ဘဲ နက်နဲသော ကျောက်ဆောင်များမှ လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်၊ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအတွင်းရှိ ပင်လယ်တောင်တန်းများသည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်တွင် ရှိနေနိုင်သော်လည်း ယခုအခါ ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အောက် မီတာရာနှင့်ချီရှိနေပြီဖြစ်သည်။
အပေးအယူ ညှိနှိုင်းမှုတစ်ခု ရှိလာနိုင်သည်။ သမုဒ္ဒရာများ မြင့်တက်လာချိန်တွင် ရေ၏အလေးချိန်သည် ပင်လယ်ကြမ်းပြင်ကို ပြိုကျစေသည်ဟု အကြံပြုထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ ဤယူဆချက်အရ သမုဒ္ဒရာသည် ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသော်လည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်ခြင်းမရှိပေ။ ယင်းက ရေမြုပ်နေသော သမုဒ္ဒရာ ကုန်းပြင်မြင့် တည်ရှိမှုနှင့် တိုက်ကြီးများ၏ တည်ရှိမှုကို ရှင်းပြနိုင်သည်။
ကမ္ဘာမြေကြီးပေါ်ရှိ သမုဒ္ဒရာများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် အပေါ်ယံလွှာရှိ အပေါ်ယံလွှာကို ဖြိုခွဲခြင်း သွယ်ဝိုက်သော ရလဒ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်ရှိ magma ထုတ်ပေးသော ဖိအားဖြင့် စတင်သည်။ ဤဖိအားသည် ပထမဦးစွာ ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာကို အားနည်းစေပြီး ကွဲထွက်စေသည်။ မက်ဂမာမှ ထုတ်လွှတ်သော ဖိအားသည် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါင်လိုက် တိမ်းညွတ်မှု ရှိသော်လည်း မက်ဂမာ၏ အမြင့်ဆုံး ဖိအားဝင်ရိုးမှ၊ အပေါ်ယံလွှာကို ကွဲစေသော အလျားလိုက် တွန်းအားကို ထုတ်ပေးသည်။. ရလဒ်အနေဖြင့် အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ကျယ်ပြန့်သော အက်ကြောင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။
အပေါ်ယံလွှာများ ဖြည်းညှင်းစွာ ခွာလိုက်သည်နှင့်အမျှ၊ မျက်နှာပြင်သည် တဖြည်းဖြည်း နစ်မြုပ်သွားပြီး ကြီးမားသော စိတ်ဓာတ်ကျမှုပုံစံ (အကွဲကြောင်း ဖိစီးမှုများကြောင့်)။ အဆိုပါ မုန်တိုင်းငယ်များတွင် မီးတောင်များ လှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပြီး (မဂ္ဂနီက လွတ်မြောက်ရန် အလားအလာရှိသည့်) မုန်တိုင်းငယ်များ အကျယ်အဝန်း တိုးလာသည်နှင့်အမျှ အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှ ၎င်းတို့သည် ရေနှင့် ပြည့်လာကာ၊ နောက်ဆုံးတွင် ၎င်းတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့သိသည့်အတိုင်း ကြီးမားသောရေများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။. ပင်လယ်နဲ့ သမုဒ္ဒရာလိုပါပဲ။ မီးတောင် ဖုံးလွှမ်းသွားသောအခါ သမုဒ္ဒရာ၏ အောက်ခြေဖြစ်လာကာ အက်ကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် မီးတောင်ကြောများကို သမုဒ္ဒရာအလယ်ခေါင်ဟု ခေါ်သည်။ အကွဲအပြဲသည် ကမ္ဘာမြေ၏ အပေါ်ယံလွှာရှိ အဖွင့်၊ ကွဲထွက်ခြင်း၊ ကွဲအက်ခြင်းနှင့် ကွဲအက်ခြင်းများ ကြီးမားသော ဧရိယာဖြစ်သည်။
သမုဒ္ဒရာများ ဖြစ်ပေါ်လာပုံ၏ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်မှုအချို့
ဝေးကွာသောဥက္ကာခဲများနှင့် ကြယ်တံခွန်များသည် ရေများပြည့်နှက်နေသည်ဟူသော ယူဆချက်သည် ဧရာမဂြိုလ်များနှင့် ကောင်းကင်ဂြိုဟ်များကြားရှိ ရှုပ်ထွေးသောဆွဲငင်အားလွှမ်းမိုးမှုလုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့၏ဝေးကွာသောပတ်လမ်းများမှ ၎င်းတို့အား ဤနေရာသို့ပို့ဆောင်ရန် လိုအပ်သည်။ Laurette Piani နှင့် National Center for Scientific Research (CNRS, French အတိုကောက်) နှင့် University of Lorraine (France) တို့မှ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့၊ သူတို့က ဘာကြောင့် အပြာရောင်ဂြိုဟ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြဖို့ နောက်ထပ် အဆိုပြုနိုင်ခြေကို သရုပ်ပြဖို့ ကြိုးစားခဲ့ကြတယ်။
ကမ္ဘာကို နေအဖွဲ့အစည်းကို ပေါက်ဖွားစေသော နက်ဗျူလာမှ အရာဝတ္ထုများ ရောနှော၍ ပြုလုပ်ထားသည်။ “ကမ္ဘာအပါအဝင် ကုန်းနေဂြိုလ်တွေဟာ ရုတ်တရက် ဖြစ်ပေါ်လာတာမဟုတ်ပေမယ့် ရာနဲ့ချီတဲ့ ကောင်းကင်တွေကနေ စုပုံလာတာကို ဒီနေ့ ကျွန်တော်တို့ သိပါတယ်” ဟု Go Space Sciences Institute မှ Small Objects and Meteorites Group ၏ အဓိက စုံစမ်းစစ်ဆေးသူ Josep Maria Terri က ရှင်းပြခဲ့သည်။ CSIC)။-IEEC)၊ ဘာစီလိုနာ။ "ကမ္ဘာမြေကိုဖွဲ့စည်းသည့်အရာဝတ္ထုများသည် နေနှင့်ပိုမိုနီးကပ်စွာဖွဲ့စည်းနိုင်ပြီး 80 မှ 90 ရာခိုင်နှုန်းသည် enstatite chondrites (သတ္တုဓာတ်အပေါများဆုံး) သို့မဟုတ် အသုံးများသော enstatite chondrites များဖြစ်ကြလိမ့်မည်" ဟုသူကဆိုသည်။
ဤအချက်အလက်ဖြင့် သမုဒ္ဒရာများ မည်သို့ဖွဲ့စည်းပုံအကြောင်း ပိုမိုလေ့လာနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ကွန်ယက်မိုးလေဝသ » ဘူမိဗေဒ » သမုဒ္ဒရာများ မည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့သနည်း။
နောင်လာနောက်သားတွေအတွက် ကျန်းမာနေစေမယ့် လှပတဲ့ Blue Planet နဲ့ပတ်သက်တဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ ဗဟုသုတတွေကို ကျွန်တော့်မေးလ်ဆီ အရောက်ပို့ဖို့ နေ့တိုင်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်...။